Naannoo Oromiyaatti Koreen komaandi postii Tasgabbii Gabaa qindaa’uun Sochii eegaleera - ETHIOPIANS TODAY
Koreen kun haala qabatamaa yeroo ammaatin gatiin meeshaalee bu’uraa fi tajaajila dabalatee kan hordofuu yoo ta’u sadarkaa naannoo hanga gandaatti kan hundaa’uu tauunis ibsameera.
Rakkoowwaan daballi gatii kun qorannoo Biiroon Daldalaa Oromiyaa geggeesseen erga adda ba’een booda furmaataa fiduuf koree ijaaramedha.
Rakkowwaan adda ba’an kunis fedhiifi dhiyeessiin wal gituu dhabuu, sirni gabaa iftoomina dhabuu, sababa dhibee Covid 19 ta’uuni marii guyyaa har’aa taasifameen adda baheera.
Gama biraan ammoo dandeettiin bittaa maallaqa biyya keessaa ba’uu fi doolarri dabaluu,daldaltootni faayida hin malle argachuuf tilmaamaa olitti gurgurtaa geeggeessuun isaan ijoodhas jedhameera.
Dabalataanis Oomishawwaan biyya alaa irraa seenan ji’oota 6 darban kanatti dhibbeenta %50 gadi bu’uun warshaaleen biyya keessaa qindeessani irratti hojjechuu dhabunis akka rakkootti ilaalamuun waliin ga’insa irratti hanqinni akka uumamees biirichi ibseera.
Kana furuuf yeroo ammaa mootummaan koree akka biyyaattii ijaaruun rakkoon kun akka furamuuf hojitti seenamee kan jiru ta’uunis maricharratti dubbatameera.
Korewwaan akka Naannoo Oromiyaattii guyyaa har’aa irraa eegale hojiwwaan to’annaa fi hordoffii, bakka gabaa mijeessuu, hojii inspeekshinii geggeessuun saaxiluu, hojii ol’aantummaa seeraa irratti hojjechuu, hordoffii nagahee gibiraaf taaksii irratti xiyyeeffachuun hojii gabaa tasgabbeessuu akka hojjetamu ibsameera.
Sekteraaleen dhimmi ilaallatu hundi qindoominaan hojjechuufi abbummaan hoggaanuun barbaachisaa ta’uu hirmaattootni koree komaandi postichaa dhaamaniiru.
Koreen kun sadarkaa naannoottii I/A/Pirezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Adde Caaltuu Saanii walitti qabduu, yoo ta’an Biiroon Daldalaa itti aanaa fi Ejeensiin gabaa oromiyaa barreessaa barreessadha. Sadarkaa Godinaalee , Magaalotaa fi Aanaaleetti immoo Bulchitootaa fi kantiiban kan gaggeefamu ta’uunis ibsameera.